နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလ – အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)
ဒူဝါလရှီးလသည် ကချင်အမျိုးသားများအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ (WMR) ဉက္ကဌဖြစ်ပြီး ကချင်လူမျိုး နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ရှေ့နေလည်းဖြစ်သည်။ ဒူဝါလရှီးလကို ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မုန်းစီးကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အလယ်တန်း ပညာကို ကွတ်ခိုင်မြို့ အမျိုးသား ခရစ်ယာန်ကျောင်း (National Christian Schools) တွင် ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ထို့နောက် လားရှိုး အထက်တန်းကျောင်းမှ “ခ” အဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဇာတိရပ်ရွာဖြစ်သော မုန်းစီးကျောင်း တွင် ဆရာအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက် မေမြို့ စိန့်မိုက်ကယ် ကျောင်း (အ.ထ.က – ၄) တွင် ၁၀ တန်း ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ၌ ဉပဒေပညာကို သင်ယူခဲ့သည်။ ဘီအေဘွဲ့ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် L.L.B ဘွဲ့ကို ထပ်မံရရှိခဲ့သည်။
ရှေ့နေ အဖြစ် (၂) နှစ်ကြာ မြစ်ကြီးနားနှင့် လားရှိုးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ ဉပဒေအရာရှိအဖြစ် (၁၆) နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်မှ အနားယူပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် School of Intensive English Program (IEP) ယခု Institute of Liberal Arts and Sciences (ILAS) ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း World Concern အဖွဲ့အစည်း စတင်ဖွဲ့စည်းရာတွင်လည်း ဦးဆောင်ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ သည်။ ၂၀၀၄ မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း၌ (၇) နှစ် ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ INGO များနှင့်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ Hope International Development Agency တွင် (၄) နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Transnational Institute (TNI) ၊ UNODC တို့နှင့်လက်တွဲကာ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကချင်စာပေနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့၏ ဉက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီး (၄) နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကချင်အမျိုးသားများ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ (WMR) ဉက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီး ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဒူဝါလရှီးလသည် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှင့် ရှမ်း ဘာသာစကားများကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်ပြီး ကချင် မျိုးနွယ်စု ဘာသာစကားများဖြစ်သည့် ဇိုင်ဝါး၊ လချိတ်၊ လော်ဝေါ်စသည့် ဘာသာစကားများကိုလည်း အတော် အသင့် နားလည်သည်။
ဒူဝါလရှီးလသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အဖွဲ့တွင် ဒုတိယသမ္မတ အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရကာ ယနေ့အချိန်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။
Copyright © 2021 . All rights reserved. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)